10-17-2010 06:57 PM #1
etzppftpdk;&vufxufrSm jrefrmEdkifiH&JU tkyfcsKyfa&;jrdKUawmfvkdU acgif;pOfwyfjyD; topfpufpufMuD; wnfaqmufvdkufwJh aejynfawmfjrdKUtaMumif;udk reD;pyfwJholrsm;taejzifhvnf;aumif;? jrefrmjynfeJU tvSrf;a0;aejyDjzpfwJh ta0;a&mufaewJh a&Trsm;avhvmvkdU &EdkifapzdkUtwGuf &nf&G,fjyD; zGifhvdkufwmjzpfygw,f/
'Do&ufatmufrSm aejynfawmfrSm&SdwJh (ppftpdk;&ajymwJh acwfrSDwJh aemufqHk;ay:wJh ) vrf;? wHwm;? taqmuftOD;awG qnfMuD;awG 0efMuD;Xme&Hk;awG wd&dpmef&HkawGutpaygh... aejynfawmfeJU ywfowfjyD; ajymcsifqdkcsifwmav;awGeJU "gwfyHkawGudk wifay;apvdkygw,f/ jrifzl;w,f &Sdwmaygh..../
uGsefawmf Google Earth uae Munhfvdkufawmh... 'Dvdk eef;awmfvdkvdkbmvkdvdkaqmufaewJh taqmuftOD; MuD;u bmtaqmuftOD;MuD;vJ rodbl;aemf.
aemufwcku 'gMuD;u tmqD,H(qD;*drf; 2013) abmvHk;jydKifyJGtwGuf &nf&G,fjyD; wnfaqmufaewJh abmvHk;uGif;MuD;rsm;vm;
aejynfawmfjrdKU&JU aeUtvS? ntvSawGudk wifay;apcsifygw,fAsm..../
Last edited by GeneralBoz; 10-18-2010 at 02:16 AM. Reason: Thumbnails for thanks
BamarBlood, barronbala, cherrytgi, chithninnwai, chitpa, creative2020202020, HtatePyaung, k-pooh, Ko Khant, Mini_Me, nijinsky, palartoo, parkye, pyinthu, Ravan, Sailing, thatonthu, ttaswo, zabuyit
10-18-2010 04:12 AM #2
ကြည့်မရတာကတော့ ကြည့်မရတာပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမဲ့ သမိုင်းမှတ်တမ်းကတော့ သမိုင်းမှတ်တမ်းပါဘဲ။ ကိုယ်ကြည့်မရလို့ ဆိုပြီး မှတ်တမ်းထဲက ဖြုတ်မထားသင့်ပါဘူး။ အခုလို မြန်မာပြည်ရဲ့ အရေးပါတဲ့ နေရာဒေသ တစ်ခုအတွက် ခေါင်းစဉ်အသစ် ဖွင့်ပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါ။
BamarBlood, barronbala, cherrytgi, creative2020202020, GeneralBoz, Ko Khant, nijinsky, Ravan, thatonthu, ttaswo
10-18-2010 11:23 AM #3
Mum;zl;wmajymr,fqdk&if wpfa,mufuajymzl;w,f aejynfawmfu aeoifhwJh t&yfr[kwfbl;wJh/ za,mif;ajrwJh/ jydKuszdkU tjzpfEdkifqHk;ajrawGxJrSm ygw,fwJh/
BamarBlood, cherrytgi, GeneralBoz, ttaswo
10-18-2010 11:54 AM #4
ဒီတစ်ခေါက်ပြည်တော်ပြန်ရင် ချစ်ချစ်က နေပြည်တော်သွားလည်မယ်ဆိုလို့ သိချင်တာလေးတွေ ဒီမှာပဲ မေးလိုက်တော့မယ်။
နေပြည်တော်သွားတဲ့အခါ တည်းခိုဖို့ ဟိုတယ်၊တည်းခိုခန်းတွေ အဆင်ပြေပါသလား။
ကိုယ်ပိုင်ကားမရှိတဲ့အခါ တစ်နေရာကနေ တစ်နေရာသွားဖို့ ဘတ်စ်ကား၊ တက်စ်ဆီ တွေရှိပါသလား။
စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ ဘယ်နေရာတွေ ရှိပါသလည်း၊ ဈေးကရော ဘယ်လိုရှိပါသလည်း ခင်ဗျာ။
BamarBlood, cherrytgi, GeneralBoz, Ko Khant, Ravan, ttaswo
10-18-2010 07:05 PM #5
ဟိုတယ်ဇုံထဲက သင်္ဂဟတို့ အမရာတို့ ရွှေဧည့်သည်တို့လို3stars4stars တွေမှာ တည်းမယ် ဆိုရင်တော့ အနဲဆုံး ၆၀ လောက်က စလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ် ... ပေါင်းလောင်းဖက်က မြင့်မိုရ်နန်းမှာတော့ ၃သောင်းခွဲလောက်က စမယ် ထင်ပါတယ် ... ပျဉ်းမနားထဲက local တည်းခိုခန်းတွေကတော့ ၁သောင်းခွဲလောက်က စမယ် ထင်ပါတယ် ... budget accommodation ရှာရင်တော့ နေပြည်တော် စည်ပင်ရဲ့ တည်းခိုရိပ်သာမှာ ၃ယောက်ခန်း ၄၅၀၀ birth attached ပါဘဲ ...
ဘတ်စ်ကားတွေ ရှိပေမဲ့ ၀န်ကြီးဋ္ဌာနတွေ ၀န်ထမ်းအိပ်ဆောင်တွေနဲ့ ဈေးတွေကြား အသွားအလာ အဆင်ပြေဖို့ ဦးတည်ချက်ထားတယ် ထင်မိလို့ အချိန်တိုတိုအတွင်းမှာ နေရာစုံ ရောက်ဖို့ အဆင်ပြေမယ် မထင်မိပါ ... မက်စ်မြန်မာက တက်စီတွေ ရှိပေမဲ့ လမ်းပေါ်မှာ ဥဒဟို သွားနေတာ မဟုတ်လို့ ဖုန်းဆက်ခေါ်မှ ရမယ် ထင်ပါတယ် ... လေဆိပ်ကနေ ဟိုတယ်ကို ၂သောင်းလောက်တောင်းတယ် ထင်ပါတယ် ... အဝေးပြေးကားတွေနဲ့ လာတာဆိုရင်တော့ ကားဂိတ်မှာ သုံးဘီးတက်စီတွေ ဆိုင်ကယ် တက်စီတွေ ရှိပါတယ် ...
ကျနော်သိသလောက်တော့ ရေပန်းဥယျာဉ် ဥပါသန်တိစေတီ တိရစ်ဆန်ဥယျာဉ် Junction Shopping Center တွေ အသွားများတယ် ထင်ပါတယ် ... ဈေးတွေထဲမှာ တစ်ခုတ်တစ်ရ သွားကြည့်လောက်တာကတော့ ညနေ ၅နာရီ ၆နာရီ ၀န်ထမ်း ရုံးဆင်းချိန် စည်တဲ့ မြို့မဈေးက ညဈေးဆန်ဆန် ဈေးတန်းဘဲ ရှိမယ် ထင်ပါတယ် ...
Last edited by sylatt; 10-18-2010 at 07:14 PM.
cherrytgi, GeneralBoz, k-pooh, mgchaint, Mini_Me, MrYoDa, Ravan, Sailing, Shwe Myoh Tharr, thuthuaung, ye'thura
10-18-2010 09:55 PM #6
ဟိုတယ်ဇုံထဲက သင်္ဂဟတို့ အမရာတို့ ရွှေဧည့်သည်တို့လို3stars4stars တွေမှာ တည်းမယ် ဆိုရင်တော့ အနဲဆုံး ၆၀ လောက်က စလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ် ... ပေါင်းလောင်းဖက်က မြင့်မိုရ်နန်းမှာတော့ ၃သောင်းခွဲလောက်က စမယ် ထင်ပါတယ် ...
'HkywfawGawmh &dkufvmcJhr,f/ pdwfcs/
tJ'D 60 wefawGudk NrefrmaiGeJY wGufNyD; ay;vdkY&ygovm;cifAsm/
Dodo, GeneralBoz, k-pooh
03-31-2011 02:33 PM #7
03-31-2011 02:12 PM #8
10-18-2010 12:07 PM #9
udkvif;a&.. uGsefawmfMum;zl;wmav;awmh 'Dae&mrSm a&;xm;zl;w,f/ za,mif;ajrqdkwmawmh
em;rvnfvdkU odwJholwOD;OD;u aocsm&Sif;jyay;Edkif&ifawmh aumif;r,faemf/
udk saillingboy vnf; aejynfawmfoGm;vnfjzpfcJh&if vrf;awG? zvufazmif;awGutp
puFmylpwdkifvkyfxm;w,fqdkwJh... ae&mav;awGudk "gwfyHk&dkufjyD; wifay;ygvm;/
BamarBlood, cherrytgi, creative2020202020, Ko Khant, Ravan, Sailing, ye'thura
10-18-2010 07:10 PM #10
aejynfawmfoGm;vnfjzpfcJh&if vrf;awG? zvufazmif;awGutp
IMPO, it looks more like of Putra Jaya, rather than Lion City.
Last edited by sylatt; 10-18-2010 at 07:15 PM.
cherrytgi, Dodo, GeneralBoz, Sailing